Jak | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana ny fomba handraisana ireo menarana mandarin: dingana isan-karazany amin'ny sary
Tsy misy tsiambaratelo hoe mandalo matetika ny mandarinina. Saingy ny ankamaroan'ny mpikarakara tokantrano dia nianatra nanamboatra sokatra matsiro avy amin'ny voankazo toy izany. Manana mofomamy sy mamy izy io, fa mahasoa koa ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny mahavariana, raha ny fanaovana marika, dia tsy afaka mampiasa afa-tsy ny voan'ny voankazo ihany, fa ny vatany ihany koa.
Feijoa jam: fomba mahandro, mahandro, mahasoa
Ny felam-borona feijoa manokana dia vao haingana teo amin'ny talantan'ny fivarotana. Ary ny vokatr'izany dia tsy hoe vao mamy fotsiny io voankazo io, fa toy ny menaka manitra sy malefaka ihany koa, izay mitondra soa lehibe ho an'ny vatantsika. Andao hojerentsika ny lanjan'ity vokatra ity ary ny fomba tsara indrindra handraisana azy.
Ny fomba hanamboarana zoma mitcchini miaraka amin'ny lemon-ririnina amin'ny ririnina
Tsy misy ilàna azy intsony ny biriky amin'ny ririnina, saingy vitsy monja izay vonona ny handà azy ireo. Raha ny marina, matetika ny sakafo fihinanana sakafo ao an-trano matetika dia manampy amin'ny fananganana latabatra na hampivelarana ny sakafon'ny fianakaviana. Fantaro ny fomba hahandro sakafo zucchini miaraka amin'ny fanampin'ny citrons - ny olon-tiana mahagaga amin'ny fahaizanao kulinaranao.
Ahoana no ahafahanao manamboatra siramamy sy ravina ho an'ny ririnina ao an-trano
Vitsy ny olona mahafantatra fa sambany vao nanomboka nihinana zezika ireo Indiana fahiny, izay nonina tany amin'ny faritr'i Meksika ankehitriny. Androany, ny tsindrin-tsakafo iray malaza dia ny zucchini jam, izay matetika ampiana amin'ny menaka na ciro. Zucchini jam dia tena mora ny mampisafotofoto ny fihinana anana.
Rose Jam: Three Best Recipes
Ny felam-boninkazo rose, ankoatra ny fofom-pofona mahafinaritra sy ny fananana fanafody, dia mety ho lasa fitaovana tena tsara ho an'ny siramamy marevaka sy malefaka. Hojerentsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanomanana azy io, ary vakio ny fomba mahazatra. Ny toetra mahasoa ao amin'ny ravina voangory Rosia dia ahitana zavatra maro izay mahasoa ny fahasalaman'ny olombelona.
Oranges jam miaraka amin'ny katsaka ao an-trano
Ny Orange jam dia lasa malaza be isan-taona. Indray mandeha dia heverina ho hafahafa izy io, fa ankehitriny dia niditra soa aman-tsara ny sakafonay, ankoatra ny karazam-bika mahazatra. Ary tsy very maina. Ity mahagaga sy mamy ity dia mahasoa ny mahandro. Ary ny felany dia hahatonga azy io ho maintimainty amin'ny vitamina sy mineraly manan-danja.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Jak